Author Topic: Macdanta Xadiidka ee Cuntadaada (Iron in Food) (Read 12311 times)
« on: January 18, 2011, 08:14:50 PM »
Waa maxay sababta ay macdanta xadiidku (iron) muhiim u tahay?
Macdanta xadiidku aad ayay muhiim u tahay maxaa yeelay waxay jirka ka caawisaa in uu sameeyo borootiinta loo yaqaanno “haemoglobin”. Haemoglobin, ama ‘Hb’, waa borootiinta laga helo unugyada dhiigga cas ee jirkaaga u kala qaadda curiyaha hawada ah ee “oxygen” waxayna midabkeeda cas u gudbisaa dhiigga.
Ingiriiska gudihiisa ilaha ku jira cuntadeena ee sida ugu badan looga helo macdanta xadiidku waa heedda iyo badeecooyinka heedda, hilibka iyo cuntooyinka hilibka leh iyo khudaarta. Waxaannu u baahan nahay in aannu cuntadeena si joogto ah uga helno macdanta xadiidka maadaama uusan jirku si fudud u nuugi karin.
Carruurta yar yar ayay iyagana macdanta xadiidku ku yaraan kartaa. Fadlan la hadal takhtarkaaga si aad u hesho talobixin ku saabsan macdanta xadiidka ee cuntada haddii aad leedahay dhallaan ama ilme yar.
• Hilibka cas ee aan barruurta lahayn
• Kalluunka, gaar ahaan kalluunka saliidda leh ee la barafeeyey ama qasacadda ku jira (sida ka la yiraahdo “mackerel” ee badi bara-baraysan, saaraadiinka iyo kuwa yar yar ee la yirahado “pilchards”)
• Iniinaha iyo digirta - gaar ahaan digirta qasacadda ku jirta, xaydarada iyo misirka
• Rootida, gaar ahaan rootida badarka dhan ama rootida maariinka ah
• Khudaarta caleemaha cagaaran, gaar ahaan noocyada kaabajka.
• Haddii aad og tahay in ay hore kuugu yarayd macdanta xadiidku, takhtarkaaga, kalkaaliyahaaga ama ummulisadaada wax ka weydii – waxay kuu diyaarin karaan in dhiigga lagaa qaado si loo baaro caddadka borootiintaada haemoglobin iyo macdantaada xadiidka.
• Kiniinnada macdanta xadiidku waxay dadka qaar u geysan karaan calool-fadhi ama yaqyaqsi (matag qabasho). La hadal takharkaaga haddii aad dareento waxyeellooyin soo raaca.
Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan qoraalkaan waad na weydiin kartaan.
Views: 13892 November 09, 2011, 11:26:38 PM
Views: 4017 July 08, 2011, 08:30:10 PM
Views: 4503 July 12, 2011, 09:53:57 PM
Views: 15618 July 20, 2011, 11:39:41 PM
Views: 3851 August 06, 2011, 05:42:47 PM